‘भकारो सुधार्नुहोस्, ५२ सय पाउनुहोस्’ – NewsAgro.com
‘भकारो सुधार्नुहोस्, ५२ सय पाउनुहोस्’
यो समाचार 318 पटक पढिएको
काठमाडौं, १० चैत/ तपाइँ (कृषक) गाई भैसी बाँध्ने भकारो कति सफा राख्नु भएको छ ? भकारो व्यस्थित त छ नि ? अनि भकारोबाट निस्केको मलमुत्रबाट कम्पोष्ट मल बनाइरहनु भएको छ की छैन ? यदी भकारो व्यवस्थित छैन भने भकारो सुधार गरिहाल्नुस है । सरकारले भकारो सुधार गरे वापत ५ हजार २ सय रुपैया अनुदान दिनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न भकारो सुधार कार्याक्रम सुरु गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले लागू गरेको यो कार्यक्रमको उद्देश्य कृषकलाई दुग्ध तथा पाडापाडी उत्पादनमा भकारोको महत्व बुझाउने र उत्पादनमा समेत वृद्धि गर्ने समेत छ । कार्यक्रम अनुसार भकारो सुधार गर्न चाहने तोकिएका जिल्लाका कृषकले पशु सेवा विभाग मातहतका जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमाफत् यो अनुदान लिन सक्नेछन् । यसको लागि चालू आवमा ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यो वर्ष मात्र मध्य पहाडि क्षेत्रका ४० जिल्लाका १ हजार कृषकलाई यो सुविधा उपलब्ध गराइने र आगामी वर्ष थप २ हजार कृषकलाई उपलब्ध गराइने सरकारी कार्यक्रम छ । “सुन्नमा सामान्य लाग्छ तर भकारो सुधारले पशु उत्पादन मात्र नभइ गोठेमल बनाउन पनि सहयोगी हुन्छ,” मन्त्रालय अन्तर्गतको माटो विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ माटो विज्ञ डा. चन्द्र रिसालले भने, “कृषकले भकारो सुधार गरी पशुमुत्र संकलन गर्ने भुई बनाउने र जम्मा गर्ने ट्याङ्की निर्माण तथा गोठेमलको खादमाथि छानो राख्ने काम गर्न अनुदान दिन लागिएको हो ।” भकारो सुधार कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले कार्यक्रम संचालन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
कृषकले गोबर मल मात्र व्यवस्थित गर्ने गरेको तर गोबर मल भन्दा पिसावमा २ गुणावढी नाइट्रोजन हुने भएकाले यसको उपयोग अधिक गर्नुपर्ने उनले बताए । परम्परागत रुपमा गोठेमल बनाउने विधीमा समेत सुधार गर्ने भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको निर्देशनालयको निश्कर्ष छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यो कार्यक्रम सुरु भएको वर्षमै लोकप्रिय बनेको छ । गत महिना पशु सेवा विभागले गरेको पाँचै विकास क्षेत्रमा सम्पन्न समिक्षा गोष्ठीमा भकारो सुधार कार्यक्रम चर्चाको प्रमुख विषय बनेको थियो ।
हाल ४० जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रम ७५ जिल्लामै माग भै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ । “आगामी वर्ष २ हजार कृषकलाई थप्ने योजना छ तर अहिले नै ४० हजार कृषकलाई उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला जिल्लाबाट माग भैसकेको छ,” रिसालले भने, “आवश्यक बजेट थपिएमा कृषकमा लोकप्रिय बनेको यो कार्यक्रम माग अनुसार जिल्लामा संचालन गर्न हामी सक्षम छौं ।” कार्यक्रमको निरन्तरता र आवश्यक बजेट थप गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भैरहेकोे उनले बताए ।
मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भकारो सुधार कार्यविधी २०७० समेत जारी गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुका धेरै कार्यक्रम संचालन गर्दा हुने अनियमितता हुने गरेको गुनासो आइरहेकाले यो कार्यक्रमको लागि अनुगमनमा विशेष प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ । कृषक छनोटका लागि गाउ विकास समिति समेतको सहयोग लिने र भकारो सुधार्ने हरेक कृषकको मोबाइल नम्बर सहितको कार्यक्रम प्रतिवेदन हरेक जिल्लाबाट निर्देशनालयमा पठाने व्यवस्था गरिएको छ । “आवश्यकता अनुसार जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रबाट समेत कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं, सिधै कृषकसँग सोधेर पनि जानकारी लिने व्यवस्था भएकाले अनियमितताको सम्भावना छैन,” रिसाले भने ।
← रोजगारीको प्रमुख आधार बन्दै डेरी उद्योग
साना किसानले खोजे अस्तित्व →
November 9, 2017 newsagro 0
अब 'किसान' पनि 'डाक्टर' !
January 28, 2016 newsagro 0
२० हजारमै प्याडल थ्रेसर: धान र गहुँ झार्न मिल्ने